‘नबोल्ने’ प्रियंका र जसिताको यस्तो तस्बिर रिलिज ! « Ramailo छ
‘नबोल्ने’ प्रियंका र जसिताको यस्तो तस्बिर रिलिज !
नायिकाद्वाय प्रियंका कार्की र जसिता गुरुगं यसै साता सम्पन्न फिल्म ‘लिलिबिली’ को प्रेसमिटमा एक अर्कामा बोलेनन् भन्ने खबर बाहिरिएको थियो । नबोल्ने यी दुई हिरोइनको निकै निकट रहेको केही तस्बिरहरु मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् ।
सार्वजनिक तस्बिरमा प्रियंका र जसिता निकै निकट रहेको जस्तो देखिन्छ भने उनीहरु एक अर्कामा रमाइरहेका पनि छन् । वाइनको बोतल समाउँदै नायक प्रदीप खड्काका दुई हिरोइन दंग पर्दै हाँसिरहेका छन् । लाग्छ उनीहरु निकै मिल्ने साथी हुन् । प्रेसमिटको भिडियो हेर्नुस् :
यसरी एकअर्कामा नजिक रहेका प्रियंका र जसिता प्रेसमिटमा चाहिं किन बोलेनन् ? उनीहरु साँच्चै बोलेनन् या मिडियाले उनीहरु बोलेका देखेन ? उसो त प्रियंकाले ‘लिलिबिली’ कै एक प्रेसमिटमा जसितासँग आफु त्यति निकट नरहेको बताएकी थिइन् । मिलन चाम्स निर्देशित यही चैत ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।